Trump oo saxiixay wareegto ka dhan ah awoodii kursiga madaxweyne gaarsiisay. - NorSom News
Trump oo saxiixay wareegto ka dhan ah awoodii kursiga madaxweyne gaarsiisay.
Madaxwayne Donald Trump ayaa saxiixay amar madaxwayne oo looga gol leeyahay in meesha looga saaro qaar ka mid ah shuruucda lagu difaacayo shirkadaha baraha bulshada. Waxuu amarkan siinayaa hay’adaha fuliya sharci in tallaabo sharci ay ka qaadaan shirkadaha baraha bulshada sida facebook iyo shirkadda Twitter-ka.
Madaxwayne Trump ayaa markii uu saxiixayay amarkan ku eedeeyay shirkadaha baraha bulshada “awoodo aan lala xisaabtamin”. Amarkan cusub ee uu madaxwaynaha saxiixay ayaa waxaa la filayaa in uu la kulmo caqabado dhanka sharciga.
Khubarada dhanka sharciga ayaa waxay sheegeen in isbadalka lagu sameynayo xeerarkan ay ahayd in ay ku lug yeeshaan aqalka congreska ama maxkamadaha dalkaasi.
Mr Trump ayaa si joogta ah ugu eedeeynayay shirkadaha baraha bulshada inay faaf-reeb ku samaynayaan codadka iyo fikradaha asliga ah. Balse dad badan ayaa aaminsan in awooda baraha bulshada at Trump u sahleen inuu toos ula xiriiro bulshadiisa ku xiran, sidaasna uu ku helo taageerayaal tiro badan oo u codeeyay doorashadii madaxweyne.
Khamiista, Mr Trump ayaa ku eedeeyay shirkadda Twitter-ka in ay faragalin ku samaynayso doorashada ka dib markii ay shirkadda dul saartay qoraa uu so dhigay in xaqiiqadiisa la iska hubiyo.
Shirkadda Twitter-ka ayaa sidoo kale intaa ku dartay ” in la iska hubiyo xaqiiqooyiinka ku saabsan Covid-19″ ka dib qoraal uu bartaasi soo dhigay afahyaeenka dowladda Shiinaha oo sheegay in asal ahaan uu Corna ka yimid Mareykanka.
Amarkan madaxwayne ayaa amraya in la sii qeexo sharciga isgaarsiinta oo ah sharci ka jira Mareykanka kaasi oo xaaladaha qaar difaacaya shirkadaha online-ka sida Facebook, Twitter iyo shirkadda YouTube.
Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa “sida ugu dhaqsiyaha badan” u bilaabi doona isku dubaridka amarkan cusub si ay aqalka congreska ugu codeeyaan.
Previous articleLabadan qodob ayay maxkamadu go´aamin doontaa kiiska maamulka masaajidka Tawfiiq
Next articleDowlada oo 456 milyan oo meelmarisay arrimaha ajaaniibta iyo qoxootiga